Masinina mipoaka fitifirana tsy tapaka
Ny fanavaozana sy ny fanavaozana, ny fihenan'ny vidiny ary ny fanatsarana ny fahombiazana-dia nahomby tamin'ny fanatontosana ireo tetik'asa fanavaozana ny masinina roa sy ny tetik'asa fanavaozana any Chengdu sy Hunan ...
Ny milina fanapoahana tifitra ampiasaina dia tsy afaka mahafeno ny fepetra ilaina amin'izao fotoana izao noho ny famolavolana voalohany, ny fahasimbana ary ny fanitsiana takiana. Ny fanavaozana mahomby sy ny fanavaozana maoderina no refy mandanjalanja indrindra hahatratrarana azy. Amin'ny maha-mpanome tolotra matihanina matihanina amin'ny fitsaboana an-tany, dia ...
Vaovao tsara --- Nipetraka tao Made-in-china ny Zibo TAA Metal tamin'ny 20 septambra
Ny fararano dia vanim-potoana fijinjana, ny volana septambra Zibo TAA Metal Technology Co., Ltd dia nanorim-ponenana tamina sehatra fandraharahana iraisam-pirenena hafa: Made-In-China. Ny tranonkala dia https://zibotaa.en.made-in-china.com/. Araka ny fantatrao dia Made-in-china no sehatra fandraharahana iraisampirenena faharoa lehibe indrindra ao Sina. Ny ...
Ny kalitao dia mahatratra ny soatoavina - vita soa aman-tsara ny tetikasan'ny takelaka vy mavesatra notifirin'ny orinasa anay ho an'ny Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.
Vao tsy ela akory izay, ny tetik'asa "milina fanamafisam-peo vita amin'ny lovia vy" novokarina sy napetraky ny orinasanay ho an'ny Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (NISCO) dia nekena tamim-pahombiazana. Telo volana monja ny tetik'asa iray manontolo nanomboka tamin'ny fanamafisana ny baiko ka hatramin'ny fandefasana azy. Amin'ny constructi tery toy izany ...
Vaovao tsara - TAA Fitaovana fanapoahana tifitra no voafantina tao anatin'ny lisitry ny fitaovana teknika (napetraka) voalohany tao amin'ny Faritanin'i Shandong tamin'ny 2021
Tao anatin'izay taona faramparany, mba hanatsarana ny fifaninanana fototra amin'ny indostrian'ny fanamboarana fitaovana, ny faritany Shandong dia nampiroborobo ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny voalohany (set) fitaovana ara-teknika amin'ny sehatra lehibe, ary nisy isan-tokantrano sy iraisam-pirenena mihitsy aza. leadi ...
Ny maha-zava-dehibe ny famolavolana endrika ivelany ho an'ny fiasa manohitra ny harafesina
Ny sampana teknikan'ny TAA dia mino fa ny pretreatment ambony dia mitana andraikitra lehibe indrindra amin'ny fanatanterahana ny coating. Anisan'ireo lafin-javatra maro misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny firakotra, ny pretreatment ambonin'ny tany no zava-dehibe indrindra. Surface pretreatment dia asa fototra Surface pretreatment dia afaka mamorona ...
TAA nanapoaka kodiarana haingam-pandeha haingana sy fanadiovana avo lenta
Ireo kodiarana nipoaka dia ampahany lehibe indrindra amin'ny milina fanapoahana tifitra iray manontolo, ary ny TAA dia mijery manokana ny kalitaony. Ny kodiarana fipoahana haingam-pandeha dia manana ny mampiavaka ny hafainganam-pandeha avo be sy ny fitifirana be dia be mitovy amin'ny heriny, izay afaka manatsara ny efficaux d'exploitation ...
TAA dia manatrika Metal + Metallurgy （Thailand） 2021 Online Expo
Ny taona 2021 dia taona sarotra, eo ambany fitarihan'ny COVID-19, mbola tsy afaka miasa ny Expo mifanatrika Expo. Misaotra ny Metal + Metallurgy （Thailand） 2021 nokarakarain'ny China Foundry Association, nanatrika izany ny TAA hanehoana vokatra farany, teknolojia vaovao ho an'ny mpanjifa. Ireto ambany ireto ny sasany ...
Voatifitra karazana milina fanapoahana sy ny saha sahaza azy
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fizotrany. Taorian'ny fipoahana fipoahana sy fanesorana ny harafesina eo ambonin'ny sehatry ny mekanika dia azo tratrarina ny kalitao tsara, ary madio sy tsara tarehy ny tarehy aorian'ny sary hosodoko. Ny tsenan'ny tifitra fanapoahana fanadiovana mac ...
Sponjy Media Abrasive
Ny haino aman-jery spaonjy dia vondrona media maloto miaraka amin'ny spaonjy urethane ho adhesive, izay manambatra ny fahafaha-mitazona ny spaonjy urethane miaraka amin'ny hery fanadiovana sy fanapahana an'ireo haino aman-jery nentina nanapoahana azy. Zibo TAA Metal no hany mpanamboatra matihanina ho an'ny fanaovan-tsosialy media spaonjy ...
TAA Carbon Steel fanapahana tariby - sombina sombin-javatra, fahombiazana avo, habe feno
Tariby fanapahana vy, amin'ny endriny roa amin'ny endriny roa - Toy ny voadidy na ny boribory. Toy ny tapaka G1 Conditioned G2 Conditioned G3 Conditioned Steel manapaka karazana tariby: vy tapaka tariby azo vita amin'ny tariby vy vaovao sy ny kodiarana kodiarana taloha. Matetika tariby fanapahana vy vita ...
Fanavaozana ny fitaovana sy fanavaozana - avelao hamelombelona ny fitaovanao
Miaraka amin'ny henjana ny politika fiarovana ny tontolo iainana nasionaly sy ny takian'ny haavon'ny kalitaon'ny vokatra, ho toy ny dingana aorian'ny fanodinana, ny fipoahana fipoahana dia nojeren'ny orinasa maro kokoa. Na ny perfo ...
TAA tariby fanapahana vy tsy misy fangarony voatifitra
Ny tariby voadidy vy tsy misy fangarony dia fantatra ihany koa fa ny tariby vita amin'ny vy tsy misy fangarony, dia karazana poti-kazo tapaka tapaka amin'ny tariby vy tsy misy fangarony. Ampiasaina indrindra izy io ho an'ny fipoahana bala, fipoahana fasika, fitifirana, famaranana, matte, fanesorana ny harafesina et ...